Vaovao - Nankasitraka mihoatra ny 8% ny RMB raha oharina amin'ny dolara amerikana tao anatin'ny antsasaky ny taona, ary ny orinasam-barotra vahiny dia nandray fepetra maro hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny fifanakalozam-bola vahiny
Avy amin'ny ambaratonga ambany tamin'ny faran'ny volana Mey ka hatramin'izao, ny tahan'ny fifanakalozana RMB dia nihatsara hatrany ary nahatratra 6.5 teo ho eo, niditra tamin'ny "6.5 eras". Ny tahan'ny parity afovoan'ny yuan dia nanalefaka teboka 27 fototra hatramin'ny 6.5782 manohitra an'i Etazonia. dolara tamin'ny 30 Novambra, naseho ny angona avy amin'ny China Foreign Exchange Trade System. Miorina amin'ny farany ambany amin'ny May 27 7.1775, ny yuan dia nankasitraka 8.3% hatreto.
Ho an'ny fahombiazan'ny RMB farany teo, ny mpikaroka ao amin'ny Bank of China Research Institute dia mino fa ny antony lehibe indrindra dia roa: voalohany, ny fanaovan-tsonia ny RCEP dia nitondra vaovao tsara, ny fampidirana ny faritra Azia-Pasifika dia hampiroborobo kokoa, izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny varotra fanondranana any Shina sy ny fanarenana ara-toekarena; Etsy ankilany, ny fahalemen'ny dolara amerikana mitohy, nidina indray nanodidina ny 92,2. Tamin'ny herinandro lasa, ny fihenam-bidy dia nahatratra 0,8%, izay nanosika ny fankasitrahana an-dàlana ny tahan'ny fifanakalozana RMB.
Na izany aza, ho an'ireo orinasam-barotra vahiny, ny fankasitrahana ny RMB dia olona faly manahy. Rehefa mankafy ny sandam-bola anatiny, dia hihena ny tombony amin'ny vidin'ny entam-barotra any ivelany, ary ho mora kokoa ny entam-barotra avy any ivelany. Noho izany, mahasoa ny manafatra orinasa, fa ny fiatraikany amin'ny fikirakirana importa sy ny orinasa manondrana indray dia voafetra, raha lehibe kokoa kosa ny fiatraikany amin'ny orinasa fanondranana. Ho an'ireo orinasam-barotra avy any ivelany, ankoatry ny mpiasa ara-bola dia mila manapa-kevitra ny amin'ny fironana ny tahan'ny fifanakalozana, tena ilaina ihany koa ny misafidy fitaovana fefy ho an'ny risika fifanakalozana toy ny safidy sy ny mialoha.